You Are Here: Home → Faits-Divers → 2014 → avril → 3 → Tapatapany
# Betongolo. Zaza nilalao maty nianjera. Omaly dia zazalahy kely iray, 5 taona, nilalao teo an-tokotany, teny Betongolo, no fantatra fa namoy ny ainy vokatry ny fianjerany. Ny vaovao no nahalalana fa raha variana nilalao tamin’ny toerana kisilasila ity zaza ity dia nibolisatra ary nikodia. Mahatratra 2 metatra ny toerana nianjerany. Nidona tamina andrintany ny lohany. Novonjena nentina teny amin’ny hopitaly. Tsy tana ihany anefa ny ainy.
# Ambohimanarina. Lehilahy nisotro DDT 2 litatra. Lehilahy iray no fantatra fa nikasa hamono tena ka nisotro DDT mahatratra 2 litatra. Teny Ambohimanarina no nisehoan’izany, omaly. Tsy nahafaty azy anefa io fanafody famonoana biby io fa narary kosa ny anao lahy. Ny voavoa voaray no nahalalana fa olona efa miasa izy io. Misy vehivavy nalainy anefa tsy nety ary dia izay no voalza fa nampamoy fo azy.
# Itaosy. Namono tena noho ny ditran-janany. Tamin’ny alatsinainy teo, ramatoa iray monina eny Itaosy no voalazan’ny vaovao fa nisotro asidra noho ny ditran-janany. Rehefa avy nisotro io zavatra io izy dia narary. Soa ihany fa nisy nahita. Niezaka ny olona nitondra azy tany amin’ny mpitsabo ary dia avotra soa aman-tsara ihany izy.